Masinina fametahana volo, milina fanalana tatoazy - Adelic
Fat frozen fitaovana
Fractional CO2 tamin'ny laser fitaovana
Fitaovana laser ND YAG
Laser volo fanesorana fitaovana
DILER PRO dia milina fanalana volo maharitra amin'ny onjam-pamokarana diode laser. Miaraka amin'ny halavan'ny onjam-peo 755nm / 808nm / 1064nm, dia afaka manala ny vatana manontolo sy ny volon'ny tarehy amin'ny fotoana iray ihany koa izy io dia afaka manafoana ny hoditra sy ny fanavaozana. Ny fomba fampangatsiahana telo (ny rano, ny rivotra, ny ETC) ary ny safira dia mahatonga ny mari-pana ambany kokoa amin'ny 0 ° C ~ 5 ° C izay mahatonga ny fanesorana volo tsy misy fanaintainana sy mahazo aina kokoa.
Micro fanjaitra Scar removal machine
Handro volamena RF microneedle fitaovana
Vana 4D HIFU fitaovana
3D HIFU milina
Fitaovana laser 60w Vaginal
2 amin'ny 1 Masinina Fat Body Slimming
Diler Pro diode laser fitaovana fanesorana volo
Adelic dia orinasan'ny vondrona eo amin'ny sehatry ny cosmetology ara-pitsaboana matihanina, mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy fitaovana fitsaboana kosmetika nandritra ny roapolo taona mahery. Mandrakotra firenena sy faritra 50 mahery manerana izao tontolo izao ny dian-tongotra fampandrosoana azy. Ny vokatra dia mandrakotra ny fitaovana ara-pahasalamana amin'ny teknolojia fototra toy ny laser, ny onjam-peo ary ny ultrasound ho antony voalohany indrindra.
Nahoana no miasa tsara ny fitaovana fanesorana volo tamin'ny laser Diler Pro
Amin'ny fanalana volo, amin'ny ankapobeny ny olona dia mampiasa fomba toy ny fikikisana antsy, crème fanalana volo, savoka fanalana volo, sns, fa ny vokatry ny fanalana volo toy izany dia tsy nesorina ny volon'ny vatana, fa matevina kokoa. Noho izany, ny salon hatsaran-tarehy ankehitriny dia mampiasa ny Diler Pro laser fanesorana volo. Diler Pro ...
Izay no frizidera matavy matihanina tsara indrindra
Be dia be ny milina fanamainana matavy (antsoina koa hoe milina cryolipolysis) eny an-tsena, manomboka amin'ny tsy mahomby, ka hatramin'ny tsena tsara, hatramin'ny teknolojia avo lenta indrindra misy marika CE ara-pitsaboana, avy eo ny zavatra hafa rehetra eo anelanelany. Tsy mahagaga raha tena mampisafotofoto ny marary sy...
Adelic dia orinasa mpitsabo matihanina
Adiresy: No.0804, Building A, Wei Lai Yu, Distrika Chaoyang, Beijing.